Faah faahin:- Dagaal qasaare geystay oo xalay ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dagaal qasaare geystay oo xalay ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa dagaal culus oo habeenkii xalay ka dhacay koonfurta magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, kaas oo u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan maamulka Puntland iyo koox hubeysan.
Dagaalkaasi ayaa la sheegayaa inuu ku bilawday weerar ay koox hubeysan kusoo qaadeen bar koontarool ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland, kaas oo ku yaala isgoyska wadada weyn ee laamiga ah iyo wadada jidka 30-ka ee laga soo galo magaalada Boosaaso.
Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkaasi ku geeriyootay illaa 2 qof oo shacab ah, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay tiro intaasi ka badan, kuwaas oo dhaawacooda la gaarsiiyay isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso.
Sarkaal ka tirsan ciidanka Puntland oo warbaahinta Bulshoweyn la hadlay ayaa sheegay in dagaalkaasi uu socday muddo kooban islamarkaana uu ku bilawday koox weerar kusoo qaaday ciidamada Puntland kadibna gadaal loo riixay, inkastoo aanay jirin wax faah faahin intaasi dheer oo laga helaayo dagaalkaas.
Si kastaba ha ahaatee, mudooyinkii ugu dambeysay waxaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ka dhacaayay dilal qorsheysan iyo weeraro gaadmo ah oo ay geysanayeen koox xiriir la leh ururdka Daacish, ee ka dagaalanta qeybo ka mid ah deegaanada Puntland.